Accueil > Gazetin'ny nosy > Minisitra Lalatiana Rakotondrazafy : Mbola tsy miafana ny toaka sy ny rongoniny
Minisitra Lalatiana Rakotondrazafy : Mbola tsy miafana ny toaka sy ny rongoniny
Isan’ny nitarika ady hevitra be teto Antananarivo ny mahakasika ny lahatsoratra izay navoakan’ny gazety Free-News omaly zoma faha 05 Jona 2020 izay mitondra ny lohan-teny hoe: “Lola Rasoamaharo, Un vulgaire voleur d’éléctricité”.
Afaka milaza izay zavatra fantany sy nanaovany fanadihadiana amin’izay tiany holazaina ny free-News satria zony sy andraikiny izany ary ao anatin’ny
fahalalahana tanteraka tokoa isika. Ny minisitra Lalatiana Rakotondrazafy izay mpanao gazety lasa Minisitry ny serasera sy ny kolotsaina ary isan’ny olona tena mahatoky sy tanakavanan’ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina ankehitriny. Mandidy mahatapaka sy atahoran’ny filoham-pirenena koa raha vao miteny.
Eo anatrehan’izany dia nitombo be dia be ny fahefany sy ny voninahitra ary milaza azy ho ambonin’ny minisitra rehetra ao amin’ny governemanta Ntsay Christian sy Andry Nirina Rajoelina izao izy. Mirehareha mihitsy fa tsy azo hozongozonina amin’ny toerana satria manana fifandraisana manokana amin’ny filoham-pirenena.
Ny gazety Free-News no fitaovana entiny hanamafisana ny toerana maha minisitra azy ka izany no mampirehareha azy satria matahotra azy hono ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy Mialy vadiny.
Koa satria misy ihany ny tsara ho fantatra amin’ny lahatsoratra navoakan’ny gazety Free-News mba hahafataran’ny mpamaky ny marina mahakasika ity raharaha herinaratra ao amin’ny JIRAMA izay lazaina na nangalarin’ny orinasa La Gazette de la Grande Ile ity. Dia ireto misy ny taratasy “Procès- verbal de constat” nataon’ny « huissier » na ny vadintany Maître Rakotonombana Bakoly Clara, tamin’ny 1 aogositra 2018 tamin’ny 2 ora tolakandro. Angamba mbola tsy niafana ny toaka sy ny rongonin’ity minisitra ity toa ny fanaony mahazatra azy raha nanome ireny taratasy ireny ny mpanao gazetiny izay ka lasa manoratsoratra be fahatany toa izao. Tena resaka olona mpisotro toaka sy mpifoka rongony no azo lazaina ity raharaha ity satria sady tsy voadinika no tsy nanaovana famakafakana. Toa izao no fanaon’ity minisitra ity hatramin’izay.
Tsy taty ivelany ihany fony izy mbola olona tsotra no nanao izao fidorohana sy fisotroana zavatra hamadomelina ary firaisana fahavetavetana izao fa hatrany amin’ny lapam-panjakana izay isany ankehitriny koa.
Eken’ny mpivavaka sy mpitondra fiangonana ve izao? Mankasitraka izao ve ny mpanabe sy ny mpitazona ny kolotsaina sy ny soatoavina Malagasy, ary ahoana no fahitan’ny filohampirenena Andry Nirina Rajoelina ny minisitrany io? Henatra hoan’ny vahoka Malagasy tsy ankanavaka izao. Izany no mpitondra azy. Asa na mba fantatrin’ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina sy ramatoa Mialy vadiny izao toetran’ny minisitra ao anatin’ny governemantany izao. Ny tsara ho fantatra koa amin’ity raharaha ity dia ny taona 2007 no tsy nampiasa intsony ny herinaratry ny JIRAMA ny trano fanontana printy ny La gazette de la Grande Ile. Tsy nitovy fijery tamin’ingahy Ravalomanana Marc izay filoham-pirenena tamin’izany andro izany ny orinasa ity. Nanakiana mafy ny fanjakana iny izy noho ny fahitany ny fanaparampahefana nataon’ingahy Ravalomanana Marc sy ny mpomba azy. Niarahana nahita fa izay olona sy orinasa nandrebireby ny fanjakana Ravalomanana Marc iny dia nopotehiny ary nogadrainy ny lehibeny. Raha marina ny filazana fa nangalatra I La Gazette de la Grande ile imprimerie dia havelan’ny fitondrana tamin’izany amin’izao ve ? Tena nenjehin’ny fanjakana Ravalomanana Marc hatramin’izay ity gazety ity nohon’ny filazany ny marina.
Tamin’ny fotoanan’ny fanjakana tetezamita 2009-2013, raha nangalatra ity orinasa ity nahoana no tsy nisy nikitika na nitory tamin’ireny fotoana ireny ?
Ny fanjakan’ingahy Hery Rajaonarimampianina ny taona 2013-2018 dia navaivay ny filazan’ny La gazette de la Grande Ile ny zavatra tsy nety nataon’ny fanjakana io , ka ny taona 2018 dia namoronana « dossiers » ity orinasa ity ka natao izay hanapotehana azy sy ny hampigadra ny tompony Lola Rasoamaharo sy ireo lehibe mpitarika azy ao. Dia navoaka amin’izay ny taratasy izay tokony hanenjehana ny orinasa ity. Izany no antony itondranay ny vaovao eto miaraka amin’ny porofo nataon’ny manampahefana nanao ny fanadihadiana tamin’izany.
Mazava hoazy fa nanahirana sy nandratra fo an’i ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy ny lahatsoratra navoakanay teto amin’ity gazety ity ny alakamisy faha 04 jona 2020 milaza hoe : “ Un peu de tenue SVP!” Izay mitanisa ny fihetsika mamoafady nataon’ity minisitra ity tao amin’ny fivoriana niarahan’ny depiote sy ny governemanta nanatantera. Fanesorana kiraro anatin’ny fivoriana lehibe sy manakaja, nampiana fangalana hoho ary mbola fijerena finday koa. Fivoriana lehibe aram-panjakana nefa no notanterahana amin’izany. Tena mangalabaraka ny olona nanendry azy sy ny goverenemanta izany, ary manary ny hasina sy ny voninahitra ny andrimpanjakana Malagasy. Izany no olona mpiaramiasa amin’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Vadin’i Mama sôsy : Naboridanin’ny prefet
Fampianarana teknika : Manao amboletra ny minisitra
Inty sy Nday : Lany henatra ny Jirama
Hetran’ny écolage : Tsy manaiky ny katôlika sy ny tsy miakina
Paositra malagasy : Misy varo-draikiraiky “arnaque”
Firenena Mikambana : Aza manao resaka misavoan-danitra
Pôlitika : Esory i Mama Sôsy dieny mbola tsy tara
Fanjakana tan-dalàna : Tsy ny fitondrana Rajoelina no hametraka azy
Inty sy Nday : Aoka tsy hiandry tondra-drano